XOG RASMI AH: Dawladda PL oo soo bandhigaysa cidii ka dambeysay Dilkii Caasho Ilyaas Aden iyo xogo laga helayo. – Puntlandtimes
XOG RASMI AH: Dawladda PL oo soo bandhigaysa cidii ka dambeysay Dilkii Caasho Ilyaas Aden iyo xogo laga helayo.
April 15, 2019 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ay Laamaha Dambi baarista dhankooda kasoo dhamaatay baarida Eedaysanayaasha loo haysto in ay ka dambeeyeen Kufsi iyo dil arxan-darro ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo bishii Feb, laguna dilay gabar jirta 12 sanno oo lagu magacaabo Caasho Ilyaas Aden.
Dadka eedaysan oo lagu hayo Xabsiyada aadka loo ilaaliyo amaankooda, ayaa hadda wajahaya maxkamad la horgeyn doono, waxaana Xeer Ilaaliyaasha dawladdu ay gudbin doonan dacwadaha iyo cadeymaha ay ku hayaan.
Warar hoose ayaa sheegaya in maxkamadda la horkeeni doono dad xataa maalmahaas laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo, waxaana aan ilaa hadda cadeyn tiradda rasmiga ah ee loo hayo dhacdadan.
Bilowgii laamaha Ammaanka ee magaalada Gaalkacyo waxaa laga soo xigtay in la qabtay 5 ruux oo ku eedaysan falkaas, balse Aabaha gabadha dhalay oo wariyayaasha lahadlay ayaa sheegay labo uun hadda la sheegay.
Baaritaanada kiiskan oo loo adeegsaday baarid caalami ah oo ay kujiraan habka dheecaan qaadida ayaa wali aan lacadeynin, waxaana socda baaritaanka oo lafilayo in hadda Garsoorka la aado.
Si weyn ayaa Isha loogu hayaa dhaqdhaqaaqyada la xariira sidii ay Cadaaladda u dhadhamin lahaayeen kuwii ka dambeeyey kufsi arxan darro oo ka dhacay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garoowe, waxaana ay dawladdu wajahaysaa cadaadis weyn.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland ayaa labo maalmood kahor booqday Maxkamadda Puntland, wuxuuna u sheegay in ay dadajiyaan Dhageysiga dacwadaha iyo xukunada dadka ku eedaysan kufsiga si sharciga loo mariyo.
Reer Puntland waxad xor kutihin Cadalada & gesinimada hadaad si xaqa garsorkiina ugu dhaqantan waxad gareysan nabad & xornimo buxda,puntland waxay noqon donta mesha wax kasta oo wanaga lagaga deydo,hadase musuq-masuq ku shaqeysatan waxad noqonaysan kuwo Eeda oo wax kasta ka xumadan,Dumarka sida folxumada ah logu kufsanayo xarumaha & magalo madaxyada puntland waxay kusocdan halag khatar badan.